Dowladda Soomaaliya oo Mareykanka waydiisatay inuu xasaanad siiyo Gen. Cali Samatar – Radio Daljir
Maarso 4, 2013 4:24 b 0
Muqdisho, March 04 – Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ka dalbatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka in ay xasaanad siiso Ra?iisulwasaarihii hore ee Soomaaliya? Generaal Maxamed? Cali Samantar oo maxkamad Maraykan ah ku heshay gaboodfallo ka dhan ah aadanaha.
Warqad uu asbuucan Ra?iisulwasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ( Saacid) u diray wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka? ayaa lagu doonayaa in? Maxamed Cali Samantar oo imika ku nool degmada? Fairfax lagu siiyo xasaanad? ka difaacaysa dacwadaha loo haysto , waxana? sarkaalkani uu ka mid ahaa saraakiishii ugu sarraysay ee ugu awoodda badnaa taliskii Siyaad Barre ee xiliyadii sideetamaadkii ilaa shagaashamaadkii.
Sannadkii hore, garsoore maxkamad federaali ah oo ku taalla Alexandria? ayaa 7 qof oo Soomaali ah u xukumay magdhaw dhan $21 Malyuun? ,iyadoo la sheegay in Generaal Samantar uu masuul ka ahaa olole dil iyo jirdil ahaa oo lagu beegsanayay beelo dagan waqooyiga Soomaliya sida xeer ilaalinata Mareykanka loo gudbiyay.
General Samantar oo? sanooyin loolan kula jiray maxkamadda Maraykanka ah ayaa ku andacoonayey in maxkamadda Maraykanka ah aanay xaq u lahayn in ay ka garnaqdo arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya,waxana ka hor inta aan? xukunkiisa lagu dhawaaqin uu ku dhawaaqay in uu musalafay oo aanu wax lacag ah haysan si uu dacwadda u sii wado,isagoo sidoo kale racfaan ka dalbaday maxkamadda sare ee Maraykanka.
General Cali Samantar Inkastoo uu aqbalay sharcinimada dilalkii dhacay,laakiin waxa uu diiday in uu isagu wax khalad ah geystay ,waxana uu? isku sifeeyey askari? halyeeye? ah oo difaacayey midnimada dalkiisa oo uu sheegay in dibadda lagaga soo duulay, waxana uu in badan ku dooday in uu gutay waajib qaran oo loo igmaday.
Qareenka u dacwoonaya Generaal samantar Joseph Peter Drennan ayaa sheegay in uu rajaynayo in dowladda Maraykanka ay fuliso dalabka dowladda Soomaaliya islamarkaana kiiskan meeshaba laga saaro.
Maxkamadda Maraykanka ayaa sannadkii hore diidday racfaanka uu dalbaday Generaal Samantar ,laakiin Qareenka reysalwasaarihii Soomaaliya ayaa sheegay in uu maanta oo isniin ah tegayo maxkamada sare ee Maraykanka si kiiskan loo laalo oo meesha looga saaro.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku weli wax hadal ah kama soo saarin dalabka ka yimi Xafiiska Ra?iisulwasaaraha ee Soomaaliya,waxana ay eegaysaa arrimaha sharci ee kiiskan iyo kaalinta ugu bannaan.
Kathy Roberts, oo ah qareen ka socda kooxda fadhigeedu yahay? San Francisco? ee lagu magcaabo Center for Justice and Accountability, ayaa sheegay in? dalabka dowladda Soomaaliya uu yahay mid niyad-jab leh .
Haddii wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay fuliso dalabka dowladda Soomaaliya, waxaa markaasi kiiskan loo dirayaa maxkmadda sare si meesha looga saaro.
Markii la diiday dalabka uu xasaanadadda ku raadinayey Reysalwasaarihii hore ee Soomaaliya ee Generaal Cali Samantar ayaa maxkamadda racfaanka ee Maraykanku sheegtay in waaxda fulinta ee Maraykanku ay tahay qayb muhiim ah oo go?aamisa arrimaha xasaanadda, laakiin aanay keli ku ahayn , Waxana sidoo kale maxkamaddu sheegaty in xadgudubyada kala ah jirdilka,iyo dilka garsoorka ka baxsan ,sida kuwa lagu eedeeyey? General Samantar aanay lahayn ilaalo sharci ah.
Kiiska ka dhanka ah Generaal Cali samantar ayaa soo bilaabmay sannadkii 2004tii ,waxana mar dhegeysatay maxkamadda sare ee Maraykanka iyadoo arrintiisu ay saamayn ku yeelatay dadka denbiyadda ka soo gala dalalka shisheeye ee ku nool Maraykanka,gaar ahaan? saraakiisha reer Israel ee ka soo qayb-qaatay gabdood fallo ka dhacay Falastiin oo ku nool Maraykanka.